Brody PR: Uyitshisa nini iFirm yakho yoBudlelane noLuntu | Martech Zone
Brody PR: Uyitshisa nini iFirm yakho yoBudlelwane boLuntu
NgoLwesithathu, Agasti 19, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Namhlanje, kunye namakhulu ambalwa ebhlogger anempembelelo, intatheli kunye neenkokheli zeshishini, ndifumene i-imeyile engacelwanga evela eBeth Brody (beth@brodypr.com) kunye nokukhutshwa kweendaba kuyo malunga neJump Start Social Media Ukupapasha iNcwadi eNtsha ye-E kwiNtengiso yezeNtlalontle yeShishini eliNcinci.
Kwakungekho kubi ngokwaneleyo ukuba yayiyi-SPAM, ikwabonelela esidlangalaleni uluhlu lwabamkeli ngegama lomntu wonke kunye nedilesi ye-imeyile. Ndakhe ndeva malunga BCC?
Andiyazi iBeth kwaye andazi Ulungelelwano PR, kodwa ndiza kubazisa, kunye nabo bonke abathengi kunye nabaxumi, ukuba kufanelekile ukubuyela umva okukhulu abakufumanayo ngoku. Impendulo enye (phendula kubo bonke) kumsonto omkhulu we-imeyile (oqhubekayo) ovela kumzi mveliso obalaseleyo ufundeka ngolu hlobo:
Ndisuse kolu luhlu lwe- f-- uluhlu endingazange ndicele ukuba ndibekho kulo kwaye andinakho ukubhalisa kuwo.
Uluhlu lwabantu oluphume lwaya ku Ngubani Iimpembelelo. Ngelixa ndithandekayo endikwenzileyo le uluhlu, ndikwatyhafile ukuba inkampani yoBudlelwane baRhulumente iya kudibanisa uluhlu olunje ngoku ukuze nje isenze spam. Ndiqinisekile ukuba i-Jump Start Social Media E-Book yinto elungileyo ye-e-ncwadi… kodwa andizukuyikhuphela, ndiyidibanise nayo, okanye ndiyicebise kuba ndigqibekile kwinkampani yabo ye-PR.
Iifemu zoBudlelane noLuntu, ngaphezulu kwakhe nabani na kolu shishino, kufuneka ziqonde iimpembelelo ze-imeyile ezingacelwanga kunye nokubaluleka konxibelelwano olusekwe kwimvume kweli lizwe logaxekile. Ndinefom yoqhakamshelwano kwindawo yam ukuze abantu bakwazi ukundishiya emgceni- leyo yindlela entle yokuba inkampani ye-PR inxibelelane nam… okanye ngamajelo angama-80 endinxibelelana nawo. Le yayilivila PR, inyulu kwaye ilula.
Ngoku idilesi yam ye-imeyile isezandleni zikaThixo-uyazi-ngubani kuba iarhente ye-PR enye ilibale yonke imigaqo ye Eyobudlelwane boluntu. Ngobubele, ngoku ndipapashe iidilesi zabo ze-imeyile kulo lonke ihlabathi ukuba libone. Zive ukhululekile ukulahla iBhete inqaku xa unyuselwa phambili ngokulandelayo- Ndiqinisekile ukuba baya kuyithanda!
UBrody uya kongezwa kuluhlu olude lwe Abagaxekile kwi-PR by UGina Trapani. Iyandenza ndizibuze ukuba ingaba u-Brody angajongana nenkundla yamatyala okophula umthetho we-CAN-SPAM kuba bengakhange babenazo iindlela zokuphuma kunxibelelwano oluninzi.
Ngexesha elizayo xa uqesha inkampani ye-PR, fumana ukuba bazakubafumana njani abachaphazeli kwimarike kunye nendlela abaya kuthetha nabo ngayo. Ukuba kufana ne-Brody PR, musa ukubaqesha. Abayifumani. Ukuba unenkampani efana ne-Brody PR e-spamming influencers, bacime. Baza kwenza umonakalo ongaphezulu kunokuba ulungele uphawu lwakho.
Ukufunda okungakumbi: Indlela i-imeyile enye eyabulala ngayo inkampani ye-PR, Ndingathanda ukuba uxoloUbudlelwane boluntu buyasilela: Isifundo kunye nesimbo ... ndiqinisekile ukuba baninzi abaza kuza…
QAPHELA: 8/21/2009 Ufumene into entle kakhulu evela eBeth Brody namhlanje uxolisa nge-snafu, uBeth unenqaku 'lezifundo azifundileyo' eza kungekudala.
UHLAZIYO OLUBALULEKILEYO: 10/19/2009 Ndifumene inowuthi evela kwenye i-Brody PR yokuba amakhonkco ethu ayengalunganga kwiPosti yethu! Siyaxolisa ngokunyanisekileyo kwaye amakhonkco ahlaziyiwe.
tags: NikelaKwiintengiso zeAppkerntypography
IiFemu zoNxibelelwano noLuntu ziLindele ukuNyusa amajelo eendaba oLuntu
Agasti 20, 2009 ngo-12: 17 PM
Elona candelo lilungileyo malunga ne-Brody PR kukuba xa ndicofa kwiwebhusayithi yabo, into yokuqala endiyibonileyo yayingumfanekiso wabo oyintloko obonisa ngokuzingca "Iarhente enesazela…"
Ukuba ayisiyonyani leyo, andazi ukuba yintoni.
Agasti 20, 2009 ngo-1: 17 PM
UDoug - abantu abenza ezi ntlobo zezinto banembono engakholelekiyo yokubaluleka kwabo. Jonga uluhlu lwabathengi bakhe; awuchukumiswanga? Nokuba awukhethanga ukungena, le nto afuna ukukuxelela yona ihlala ibaluleke kakhulu, kwaye ukhaliphile kangangokuba uqinisekile ukuba uyakuxabisa ukuba wakubabala ngobukho be-imeyile.
Nina bantu beendaba zentlalo aniyifumani xa kuziwa kwezona zibaluleke ngokwenene.
Agasti 20, 2009 ngo-1: 42 PM
Enkosi ngokuthumela le nto, uDoug. Unxibelelwano lwabo loluntu, emva koko kukho ubudlelwane beendaba, kwaye ke KUFUNEKA babenobudlelwane beendaba zosasazo (isambrela sokuba abaphembeleli kufuneka bawele phantsi). Ukudibanisa ezi zinto zintathu kwikota enye kukusilela okungaguquguqukiyo kulo lonke ishishini, kunye nobungqina obuqinisekileyo bokuba uninzi lweefemu azilufumani.
Agasti 20, 2009 ngo-2: 38 PM
Kulunge ngokwenene indlela owe ngayo owacinga ukuba unefuthe kuyo kanye kumgca wokuqala
Agasti 20, 2009 ngo-5: 59 PM
Brody PR #ukusilela
Agasti 20, 2009 ngo-6: 15 PM
wow-ewe le f-up enkulu kodwa ngaphandle kokuba le yimpazamo ephindaphindayo kwinxalenye yabo kuya kufuneka unike isibonelelo sokuthandabuza. Abantu baneentsuku ezimbi kwaye benza iimpazamo ngamanye amaxesha. Ungathini xa umntu ebiza intloko yakho kwaye athabathe ihlokondiba emva kwakho ngalo lonke ixesha usenza impazamo ekuhambeni kwemini? Esi sithuba sinokuba yinto nje ngaphandle kokugculela esidlangalaleni iarhente kunye noluntu ekuthethwa ngalo. Ngokucacileyo, kuya kufuneka ubenosuku olubi ngokwakho ukuba ube nomsindo kwaye ulwe.
Agasti 21, 2009 ngo-2: 56 PM
Andivumi. Kwaye enyanisweni, ndicinga ukuba esi sithuba sasirhabaxa ngokungafanelekanga. NGOKUQINISEKILEYO umfazi uyayazi iBCC. Wenze impazamo. Umgca weCC kunye neBCC ziimilimitha nje kude enye kwenye.
Uyavuma ukuba awuyazi iBeth Brody okanye iBrody PR. Ungazithetha ezizinto uzithethileyo kule post ebusweni bakhe. Ungathi kumxhasi wakhe phambi kwakhe ukuba bamgxothe kuba wenze impazamo ngokungafaki abantu kumgca we-BCC? Andikwazi, ke andiyazi impendulo yalo mbuzo, kodwa ndinomdla wokwazi.
Le yi-FAR evela kogaxekile. Awufumani ogaxekile bokwenene?
Lo mfazi wenze impazamo ethembekileyo kwaye impendulo ibingafanelekanga kwaphela. Wonke umntu ophendulileyo, kubandakanya nesicatshulwa osisebenzisileyo, WAZI into abayenzayo. Babengabo begaxela wonke umntu, besazi. Kwaye ndiqinisekile ayiloxesha lokuqala le nto yenzekileyo.Ndingathanda ukwazi iingcinga zakho kwinqaku endilibhalileyo malunga nesiqwenga:
Imidiya yokuncokola "gurus" kunye neebhlogger ziijerkers ze-egotistical
Kwakhona, ukuba ufuna ibali lokwenyani le-PR lokwenyani, funda le. Yiparter ezimbini apho umthengi engena nentshukumo ecekeceke ekugqibeleni.
Hei PR, iiblogger asizizixhobo zokusetyenziswa
UKUHLAZIYA: Ibali lamava e-PR elibi. Umthengi we-PR yenkampani ulungile.
Agasti 21, 2009 ngo-4: 59 PM
1. Khange ndiqalise olu luhlu loyikekayo lweziganeko, dspark. Kuye kwafuneka ndisabele kuyo.
2. Le yinkampani YOLUNTU OLUNTU. Lo ngumSEBENZI wabo kwaye, kuthiwa, UVAVANYO lwabo. Kufana nokubuza ukuba isigulana esinqunywe umlenze ngengozi akufuneki sicaphuke kwaGqirha.
3. Yayingacelwanga i-imeyile yorhwebo NGAPHANDLE kokuphuma.
4. Balwakha ngokufihlakeleyo olu luhlu lweedilesi ze-imeyile ngaphandle kwabamkeli ukuba bazi.
Le yayingeyona mpazamo inyanisekileyo- kuye kwafuneka kuthathe iinyanga ukubeka olu luhlu kunye kwaye abathengi babo BABHALA ngale nkonzo. Ayinyanisekanga, ichasene kwaphela - kokubini ububi nokukhohlisa.
Agasti 22, 2009 ngo-11: 44 PM
Kuya kufuneka ikunike ubunzima ukuba ungaze wenze naziphi na iimpazamo, Douglas. Ndiyakuncoma ngenxa yalonto, ukuze ungaphazami ungaze wenze impazamo kwi-PR.
Ndikunye noDavide kule nto. Ngaphezulu kwaye akuyomfuneko, kodwa kufuneka usive isidingo sokuya phambili kunezinye izithuba.
Agasti 23, 2009 ngo-4: 46 PM
Khange nditsho ukuba andizenzi iimpazamo. Xa ndenza iimpazamo, ndadibana neziphumo. Ukuba besingenaziphumo, ngekhe sazi ukuba yimpazamo, andithi? Ndinxibelelana noNks Brody, ndimthumelele incwadi yam ye-ebook kwiBlogging yeShishini, kwaye ndacebisa ukumnceda aqine ngayo nayiphi na into ayifunayo.
Agasti 24, 2009 kwi-5: 45 AM
Ewe wenze. Yonke into yokuzincama.
Agasti 21, 2009 ngo-9: 20 PM
Andazi ngoDoug, kodwa ndingathetha izinto ezifanayo kuNkz Brody ngokuthe ngqo ukuba ndinethuba.
Ndicinga ukuba mbi ngakumbi kunogaxekile wesiko. Iifemu zobudlelwane noluntu azingobathengisi. Bacingelwe ukuba babe ziincutshe zonxibelelwano ezaziyo ukuba zeziphi iintlobo zemiyalezo eya kukonwabisa abaphulaphuli kwaye ngawaphi amaqhinga aya kubacaphukisa. Ukuba kukho nabani na ekufuneka eyazi indlela yokuqinisekisa ukuba umyalezo uhamba ngokuchanekileyo, yinkampani ye-PR.
Agasti 23, 2009 ngo-4: 47 PM
Ndandinalo ithuba. UBeth Brody waqhagamshelana nam nge-imeyile kwaye wacela imvume kum ukucaphula ibhlog yam kwibhlog yakhe entsha, Izifundo ezifundwayo. Kwaye ndaye ndacela uxolo ngokusemthethweni - ndasifumana. Ndicinga ukuba uNks. Brody uza kuphila koku… ngaphandle kwamathandabuzo.
Agasti 21, 2009 ngo-7: 55 PM
Bendihlala ndicinga ukuba akukho mntu waziyo ukuba yeyiphi i-BCC. Nditshintshe ingqondo yam. Ndifumana iindaba kunye nokukhutshwa kwe-PR imini yonke (ngamanye amaxesha) AMAKHULU eedilesi ze-imeyile kwi-TO: intsimi (rhoqo amagama kunye ne-imeyile zabo bonke abantu beendaba e-Indiana kwirediyo Ukushicilela iTV, uninzi lwabo ndiqinisekile ukuba abafuni ukuba idilesi ye-imeyile bayidlulise esidlangalaleni, ndingasathethi ke ukuba ndiyakholelwa ukuba oku kwaphula umthetho womanyano, akunjalo?).
Ndicinga ukuba ngabom kwaye ngabom kumzamo wokwazisa abamkeli ukuba ngubani ofumene i-imeyile. Okokuqala, kuphakamisa ukubaluleka komthumeli ngokubonisa kubaphulaphuli abanobungakanani besityholo sempembelelo yabo. Kananjalo ngokwenza oku, kubeka ubuqili obuncinci (okanye mhlawumbi HAYI kucaca) uxinzelelo kumamkeli ukuba asebenzise imathiriyeli. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba bonke aba baphembeleli babalaseleyo bafumana izinto kwaye banokuzisebenzisa, bekungafanelekanga ukuba nam ndizisebenzisa?
Kwaye eyona nto yile: ngokuqinisekileyo unenze ukuba nithethe ngayo, andibi kunjalo? Uyazibuza ukuba bangaphi abantu abafunda ibhlog yakho kwaye bacofe amakhonkco abonelelweyo? Ithini into endala yezopolitiko? "Ukuxelwa kakubi kubhetele kunokuba kungabikho konke-pela nje igama lam ngokufanelekileyo." Uthathe isithiyelo, umgca wokuloba kunye nesinki. Kwaye ngaloo ndlela, wawenza umsebenzi wakhe NGOKWENENE.
Agasti 24, 2009 ngo-12: 46 PM
Yinto enomdla ukuthatha ... kodwa sithetha ngoBrody, hayi umthengi. Ingayingxaki leyo!
Agasti 21, 2009 ngo-9: 12 PM
Impendulo yethu koku yile: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
Agasti 25, 2009 ngo-8: 39 PM
Ukusilela kwi-BCC kukusilela kakhulu kwe-ATD, kodwa kwi-PR kuya kufuneka uthumele ukukhutshwa koonondaba kunxibelelwano lwabasasazi ngobuninzi-kuphela kwendlela onokuyifumana ngayo kuye wonke umntu ochaphazelekayo ngelixa lisemgangathweni. Ndiyawuqonda umsindo wakho wokuba idilesi yakho ye-imeyile yaziwe esidlangalaleni- kwaye ulungile ukuba uzive ngale ndlela- kodwa, njengebhlogi, awungethandi ukwazi ngamabali eendaba xa zisenzeka, kwaye zintsha kwaye zintsha, kunokuba ulinde ukubuzwa?
Andazi ukuba kunjani kumazwe, kodwa apha eNgilani intatheli zibhalisela kwiziko lolwazi ngokukhethekileyo ukuze bathunyelwe izinto ezifanelekileyo kubo ngabantu abangenakuba nako ukuzibandakanya nabo. Yintoni engalunganga ngaloo nto?
Agasti 25, 2009 ngo-8: 45 PM
Kwaye oku kunokuba yinto encinci yokwenza iakhawunti, umntu osandula ukuqala kwi-PR, kwaye wenze impazamo. Umonakalisile ngokupheleleyo. Kutheni ingathi awukhathali kangaka? Ubuncinane impazamo yakhe yayimsulwa.
Akukho mfuneko yokuba bachithe iinyanga behlanganisa uluhlu-ungaya kwi-Media Atlas, Vocus, Cision okanye naliphi na inani lezinye iziseko zedatha kunye nokutsala uluhlu lweentatheli, iibhlog, abahleli, abavelisi… nokuba yeyiphi na. Ndithumele uxwebhu losasazo kubantu abangama-227 izolo, namhlanje ndibatsalele umnxeba bonke ukubona ukuba bayayisebenzisa. Ndinomthwalo wodliwanondlebe kunye nokugubungela umthengi wam ngaphandle kwayo. Ngaba ayilunganga? Hayi, yindlela izinto ezisebenza ngayo-bayayazi, ndiyayazi, akukho mntu uyikhalayo.
Agasti 25, 2009 ngo-9: 54 PM
I-PRMira, Into abayenzileyo, kunye nento oyenzayo, ayikho semthethweni eUnited States. Kuya kufuneka unikezele ngenkqubo yokuphuma, kungenjalo wophula umthetho we-CAN-SPAM. Ngaba uyayiqonda into yokuba ubeka inkampani yakho emngciphekweni? Misa ukugaxela abantu. Faka i-opt-n ​​kwindawo yakho kwaye uqokelele iidilesi ze-imeyile ngendlela efanelekileyo-kunye nemvume yabantu.
Agasti 28, 2009 kwi-11: 38 AM
Andiyibeki enkampanini yam emngciphekweni, kuba iintatheli ziyakuxabisa ukuthunyelwa kolwazi olufanelekileyo kubo kwaye kude kube ngoku. Le yindlela esebenza ngayo i-PR kwaye uninzi lwabantu lonwabile kukuseta, abantu abafumana ukukhutshwa kweendaba kubandakanya. Ngamanye amaxesha ungayithumela komnye umntu engafanelekanga, emva koko bakuxelele, uyaxolisa kwaye akukho mntu ubhala ibhlog ekhohlakeleyo ngayo.
Ngokucacileyo andazi malunga nemithetho eMelika, kodwa njengeVocus, iCision, njl, isebenza kwihlabathi jikelele (ndicinga ukuba zingaba ziinkampani zaseMelika), andicingi ukuba yahluke kakhulu. Ngokwenene ndicinga ukuba udala isaqhwithi kwindawo yokufundisa. Akufani nokuthi akuthumelele i-imeyile malunga neepilisi zokwandisa ipenisi okanye ukubuza iinkcukacha zebhanki yakho-eli yayiliqhekeza lokwenyani le-PR, ekuvunyelwene ukuba, wayelukhupha ngokungaphumeleli kwi-BCC, kodwa bubungakanani bayo. Akukho sidingo sokusabela kwakho.
Agasti 28, 2009 ngo-2: 30 PM
Agasti 28, 2009 ngo-11: 09 PM
"Le yindlela esebenza ngayo i-PR" ayisiyonyani. Ndinobudlelwane kunye neenkampani ezininzi ze-PR kwaye aziqokeleli iidilesi ze-imeyile zabashukumisayo kwimarike ngaphandle kwemvume yabo emva koko ke bona SPAM. Ndingacebisa kakhulu ukuba uphinde ucinge izicwangciso zakho. Usenokuba ufumana iziphumo zabaxumi bakho, kodwa i-POTENTIAL yokufumana iziphumo ezingcono ngokwakha ubudlelwane obusekwe kwimvume bukhulu kakhulu.
Ndingacebisa ukuba ufunde nemithetho yase-UK kwi-SPAM, "Amashishini asenokusondela 'kubanda' ngee-imeyile kodwa kwezi meko ii-imeyile kufuneka zibe negatya lokuphuma."